काठमाडौं – तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल मिलेर बनेको समाजवादी पार्टी नेपालका प्रचार विभाग प्रमुख हुन्, प्रशान्त सिंह । समाजवादी पार्टीका सचिव समेत रहेका नेता सिंह नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको बहस नटुंगिएको दाबी गर्छन् ।
लोकान्तर डटकमको लोकान्तर शोमा कुरा गर्दै नेता सिंहले आगामी एक दशकसम्म देशलाई निकाश दिने एजेण्डा आफूहरूसँग मात्र रहेको दाबी गरे ।
नेकपा र नेपाली कांग्रेस जस्ता मूलधारका राजनीतिक पार्टीलाई विस्थापित गरेर देशको पहिलो दल बन्ने आधार के हो ? देश राजनीतिक स्थितराउन्मुख रहेको समयमा समाजवादी पार्टीले किन फेरि ११ प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सारेको ? यी प्रश्नको जवाफका लागि हेर्नुहोस्, भिडियो अन्तर्वार्ता :
ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्ने विषय हामीले सोच्न पनि ...